Momba anay | Hebei Ximai Machines Equipment Sales Co., Ltd.
Nandritra ny 20 taona mahery ny fampandrosoana, Hebei Ximai Masinina dia nitombo ho mpanamboatra paompy beton feno. Ny vokatra dia manarona sokajy 4, sokajy mihoatra ny 30 ary singa tokana an'arivony. Ny renivohitra voasoratra ao Ximai dia 75 tapitrisa yuan, mahatratra 94, 600 metatra toradroa ny velarany, ary maherin'ny 350 ny mpampiasa azy ankehitriny, ao anatin'izany ireo injeniera zokiolona 13, mpiasa 27 R & D / kalitao / mpiasa teknika, mpiasa maherin'ny 240, ary mihoatra ny Mpiasan'ny serivisy 60
Ximai dia manana atrikasa famokarana 13 total, ao anatin'izany ny atrikasa fanapahana, atrikasa fanodinana milina CNC, atrikasa Derusting, atrikasa fanamafisana, atrikasa fanaovana hosodoko Ny orinasan-tsika dia manana fitaovana matihanina marobe, toy ny, fitaovana fitsaboana hafanana avo lenta avo lenta, fitaovana fantsom-panafanana ambany hafanana, milina fanodinana hydraulic, milina fanodinana CNC lehibe sns. Afaka mamokatra fantsona paompy, fittings ary fitaovana fanampiny ho an'ny PM, SCHWING, CIFA, JUNJIN, SANY, Zoomlion, Foton, ary ny hafa izahay.
Hatramin'ny 1995, ny vokatra Hebei Ximai dia amidy any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 80 manerantany. Manaraka ny fitsipiky ny "mpanjifa aloha" sy "marika voalohany", Hebei Ximai dia namorona rafitra serivisy ho an'ny mpanjifa feno. Miaraka amin'ny kalitao tsara, ny vidiny mirary, ny fomba fandoavam-bola, ny fandefasana ara-potoana ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa tonga lafatra, Hebei Ximai dia mahazo laza tsara eo amin'ny mpanjifa.
Raha ianao ...
1. Mitady mpanamboatra OEM / ODM amin'ity orinasa ity.
2. Mila olona afaka mamokatra izay tianao ary manana endrika manokana natao pirinty tamin'ny famaritana anao.
Avy eo ny serivisy OEM / ODM ho anao!
1. Te hividy baiko santionany aloha.
2. Vidio ny baiko feno aorian'ny fanamarinana ny kalitaon'ny vokatra.
Avy eo ny serivisinao Sample Order dia ho anao!
1. Te hanana fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasanay.
2. Te hitsidika an'i Shina ary liana hiara-hiasa aminay.
Avy eo ny serivisinao momba ny Factory Tour dia ho anao!
ADDRESS9 Jianming M Rd, Faritanin'i Hebei, Shijiazhuang, Hebei, Sina